IBitbucket izosusa ukwesekwa kweMercurial futhi igxile kuGit | Kusuka kuLinux
IBitbucket izosusa ukwesekwa kweMercurial futhi igxile kuGit
Ngokuthumela kubhulogi ye ipulatifomu ethandwayo yokusebenzisana ngokubambisana IBitbucket, kumenyezelwe ukuthi le nkundla ngeke isasebenzisana nayo uhlelo lokulawula umthombo IMercurial ezoshintshwa ivune iGit.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ekuqaleni insizakalo yeBitbucket ibigxile kuphela kwiMercurial, kepha kusukela ngo-2011, nayo yaqala ukuhlinzeka ukwesekwa kweGit. Kuyaziwa ukuthi iBitbucket manje isivele isuka kumathuluzi wokulawula inguqulo iye kupulatifomu yokuphatha umjikelezo ophelele wokuthuthukiswa kwesoftware.
Lo nyaka, Ukuthuthukiswa kweBitbucket kuzogxila emkhakheni wokukhulisa ngokuhlanganyela namathuluzi wokuzenzekelayo, ezosiza ukwenza lula ukuhlelwa kwephrojekthi, ukufaka amakhodi nokusabalalisa.
Ngamakhosombe angaphezu kwezigidi ezingama-28, IBitbucket igubha abasebenzisi bayo ababhalisiwe abayizigidi eziyi-10s ku-Bitbucket Cloud ngo-Ephreli odlule. IBitbucket inikeza ukuhlanganiswa namathuluzi afana noJira, Trello namanye amathuluzi omndeni wakwa-Atlassian, ongumnikazi wesikhulumi.
Ipulatifomu ikuvumela ukuthi usebenzise, ​​uvivinye, ubheke, uhlaziye ikhodi noma ugcine izinto. Inikeza ukuhlanganiswa okuvulekile ne-AWS, JFrog, Datadog, LaunchDarkly, Slack, nokuningi.
Isizathu sokuthi uncike ekusebenziseni i-git kungenxa yokuthi Ukusekelwa kwezinhlelo ezimbili zokulawula izinhlobo kubambezela futhi kwenza kube nzima ukwenziwa kwezinhlelo, ngakho-ke kwanqunywa ukuthi kugxilwe kukho konke ukunakwa kuphela kwi-Git futhi kushiywe iMercurial ngokuphelele. IGit ikhethwe njengomkhiqizo ofanelekile, osebenzayo futhi othandwayo.
Ithimba leBitbucket lihlela ukuphothula ukwakhiwa kwezinqolobane ezintsha zeMercurial ngabasebenzisi kusukela ngoFebhuwari 1, 2020.
Khona-ke, Kusukela ngoJuni 1 wangonyaka ofanayo, abasebenzisi ngeke bakwazi ukusebenzisa izici zeMercurial ku-Bitbucket noma nge-API yayo futhi wonke amadiphozi akwaMercurial azosuswa. Ngokuqondene nazo zonke izici zeMercurial zamanje zeBitbucket, zizotholakala kuze kube nguMeyi 31 wonyaka ozayo, ngaphambi kokukhishwa.
Ngakho-ke abasebenzisi bayakhuthazwa ukuthi bathuthele eGit, lapho izinsiza zinikezwa ukuguqula amakhosombe. Uma onjiniyela bengafuni ukushintsha amathuluzi ajwayelekile, kuhlongozwa ukuthi ushintshele kwezinye izinsizakalo zokubamba imithombo evulekile. Isibonelo, ukwesekwa kweMercurial kunikezwa eSourceForge, Mozdev naseSavannah.
Ngokusho kwethimba leBitbucket, izinto zekhwalithi yokwakha zidinga ukunakwa okukhulu.
"Njengoba iGit iyithuluzi elisetshenziswa kakhulu, iMercurial ibeka engcupheni yokunganaki izinkinga njengoba siguquka," kufunda iposi le-blog.
Ukucacisa isinqumo sayo sokushiya ukwesekwa kweMerccurial, iqembu leBitbucket libika imiphumela yocwaningo
Ngokuya kwenhlolovo ye-Stack Overflow, cishe ama-90% wabathuthukisi bathanda iGit, futhi ngu-3% kuphela wabaphenduli abasebenzisa iMercurial.
Izibalo zangaphakathi zeBitbucket ziqinisekisa ukuthambekela okufanayo, okukhombisa ukwehla okungaguquguquki kokuthandwa kweMercurial: kukhethwe abangaphansi kwe-1% labasebenzisi abasha beMercurial. Ngasikhathi sinye, iMercurial iyaqhubeka nokusetshenziselwa ukwenza amaphrojekthi weMozilla, OpenOffice.org, OpenSolaris, OpenJDK, Nginx, Xine, neW3C.
Ungayithuthukisa kanjani futhi uyithumele kwamanye amadiphozi ama-mercury
Ithimba le- IBitbucket incoma ukuthi amaqembu ezentuthuko athuthele izinqolobane zawo ezikhona zeMercurial ziye eGit.
Ukuze wenze lokhu, inikeza amathuluzi ahlukile wokuguqula we-Git ezisemakethe, kufaka phakathi i-hg-fast-export kanye ne-hg-git mercurial plugin.
Ukusekela ukufuduka kwamakhasimende ayo, iBitbucket idale izinsizakusebenza ezilandelayo zokunikeza ulwazi namathuluzi adingekayo ekuguqukeni okungcono: intambo yomphakathi ezinikele yokuxoxa ngamathuluzi wokuguqula, ukufuduka, amathiphu, nosizo lokuxazulula inkinga yolwazi kanye nesifundo seGit esimboza izisekelo yokwenza imibuzo yokudonsa, ukudala imininingwane emisha, nezingwegwe zeGit.
Kodwa-ke, kulawo makhasimende akhetha ukuqhubeka nokusebenzisa uhlelo lweMercurial, kunezinsizakalo eziningi zokubamba mahhala zeMercurial, ngokusho kweposi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » IBitbucket izosusa ukwesekwa kweMercurial futhi igxile kuGit
I-Google Chrome OS 76: ithuthukisa ukusekelwa kwama-akhawunti amaningi ama-Chromebook
Uhlobo olusha lweVLC 3.0.8 lufika nesisombululo sezinkinga ezahlukahlukene zokuphepha